Malware pazviteshi zvegesi. Visa inoshora chimiro chitsva chematsotsi. | Linux Vakapindwa muropa
Iyo VISA yekubhadhara kubhadharisa kambani, dhaiza kuti vatengesi vekuNorth America vanoshandisa gasi mafuta vanooneswaakateedzana ekurwiswa yemapoka evapambi vemakomputa vachitsvaga dshandisa malware pane zviteshi poindi yekutengesa (POS) mumasaiti avo.
Mashandiro anoita Malware Panzvimbo dzeGesi
Mumaziso ekuchengetedza maviri akaburitswa munaNovember naDecember, zvichiteerana, VISA yakati timu yayo yekuchengetedza yakapindira mukati zviitiko zvishanu zvakadaro.
Iyo kiredhiti kadhi rinoburitsa kambani yakataura kuti cybercrime mapoka akaita kurwisa pamwe ne chinangwa chekutanga chekuwana mukana wevatengesi network yemafuta, kuitira kuti gadza malware pane nzvimbo dzekutengesa zviteshi.
Pfungwa yekutengesa malware anoshanda uchienderera mberi uchiongorora RAM yekombuta kune izvo zvinoita senge isina kunyorwa dhipoziti kadhi rekubhadhara, iyo inounganidza wozoisa kune iri kure server.
VISA Kubhadhara Kubiridzira Kupindira (PFD) timu inochengetedza kuti mapoka e-cybercrime anofanira wawana poindi isina kusimba munzira dzekuunganidza ayo anoshandiswa munzvimbo dzemagetsi.
Kunyangwe mazhinji emaPOS terminals evamwe vatengesi anogona kutsigira chip transaction, iyo Vaverengi vazhinji vemakadhi akaiswa mumapombi egasi havana kugona uku.
Aya maverengi emakadhi echikwereti anoshandiswa nenzvimbo zhinji dzemagetsi vachiri kumhanya pane yekare tekinoroji inogona chete kuverenga iyo yekubhadhara dhata kubva kune iyo kadhi's magnetic stripe.
Iyo data kubva kune aya echinyakare kadhi kuverenga zvinotumirwa zvisina kunyorwa kunzvimbo huru yegasi chiteshi. Apa ndipo pakawanikwa matsotsi vanogona kuvabata.
MunaNovember 2019, VISA yakashuma kuti yaive yakanyoreswa kutyorwa mumadhipatimendi maviri emafuta, Yakawedzerwa kune matatu ekuzivisa akawedzerwa muna Zvita wegore rino, anoshanda kuratidza izvo cybercriminals vakawana chinangwa chitsva uye modus operandi nyowani.
Sezvinozivikanwa, kurwiswa kwakatanga muzhizha rekuchamhembe kwenyika uye vangangoita vaviri vacho ibasa reboka revanozivikanwa vezvemakomputa anonzi FIN8.
Zvisinei, zvinoita kunge isiri kutyora kwekuchengetedza kunonetsa kuvhara.
VISA yakati nzira yakapusa kumakambani anotengesa mafuta kuchengetedza vatengi vavo ndeiyi encryption yemakadhi data apo uchiendeswa pamusoro petiweki kana kuchengetwa mundangariro. Imwe sarudzo ndeye chinja zviteshi zvazvino nedzimwe dzazvino uno dzinogona kuverenga machipisi emakadhi.
Iko kunoratidzika kuve pasina kupokana nezvekuti ndeipi sarudzo inosarudzika yeVISA:
Vatengesi vemafuta vanofanirwa kucherechedza chiitiko ichi uye kuendesa zvishandiso zvinotsigira chip pese pazvinogoneka, sezvo izvi zvichizodzora zvakanyanya mukana wekurwiswa uku.
Uye izvi zvinopfuura kungopa zano.
Vashandi vekupa mafuta vane kusvika Gumiguru 2020 nokuti shandisa vaverengi vemakadhi anowirirana-chip pamapombi avo egasi. Kubva muna Gumiguru 2020, VISA inoronga kuendesa mutoro kune chero kadhi kubiridzira kubva kune vanopa makadhi kune vatengesi. Hapana mubvunzo kuti ichi chinhu chakakurudzira kune vazhinji vanoshanda kuti vasarudze kugadzirisa avo vaverengi vekadhi rechikwereti. Kusvika panguva iyoyo, vazhinji vanoramba vari panjodzi yekurwiswa.
Zvichakadaro, kana iwe uchironga kufamba nemotokari muUnited States, pamusoro pekusarudza inotungamirwa kana isina unleaded gasi pombi, uchafanirwa kuenda neiyo inouya kana kana isina malware.
Uye, nekuti matsotsi ari kugara achitsvaga nzira nyowani dzekuba data redu, zvakakoshawo kuti tiongorore zvatinoshandisa kazhinji pawebsite yedu kadhi rechikwereti. Mushure mezvose, sekutaura kwaAndy Grove mukuru
Iwo maparanoid chete ndiwo anorarama.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Malware panzvimbo dzemagasi. VISA inoshora mhando nyowani yekurwisa kwemakomputa
Hupenyu Strange 2 iri kuuya kuLinux uye macOS uyu China nekuda kweFeral Interactive